UHLOBO OLUTSHANJE LWEFASHONI EPHAKAMILEYO- AMASHIYA AMASPOCK - IINDABA
Uhlobo olutshanje lweFashoni ePhakamileyo- Amashiya amaSpock
Ukusukela ixesha lokuqala le-Original Series, abalandeli bachukunyisiwe hayi kuphela yunifomu enxitywe nguKirk, uSpock, kunye nentsalela yabasebenzi nangona kunjalo, iimpahla ezinxitywa ziinkwenkwezi zabatyeleli ngokufanelekileyo.
Enkosi kwizakhono zomyili wempahla UWilliam Ware Theiss , ezi yunifom zizimpawu ezibonakalayo. Ngokwenyani, ziye zaqala ngokutsha (ngolandelelwano lwee-movie zikaKelvin) kwaye zacingelwa (ngokulandelelana ngokulandelelana kwehlabathi elitsha). Into eqale umzekelo ukulula kunye nembonakalo yekamva ikhule yaba yenye yemicimbi emininzi eyakhunjulwa ziingcali kunye nabalandeli kwaye zenza ukuba ziphinde ziphinde zibekho.
Kutheni iiklingoni zikhangeleka zahlukile ekufumaneni
Ithemba likaStar Trek lokucinga nokuqonda ixesha elide lulwimi olubonakalayo olukhulu kwimilo ehlengahlengisiweyo, imibala ephambili, kunye neentsingiselo zentsimbi, kwaye sisimemo sokucingisisa kwakhona ukuba yintoni efaneleke 'njengefashoni' kwasekuqaleni, Ubhala uVogue kaJanelle Okwodu .
Kwi inqaku lakhe , Okwodu wabelana ngemizekelo eliqela yesimbo esigqithisileyo, esachukunyiswa yi Star Trek. Ezi ngelinye ilanga zingenza ukhetho kwiitracks zesitayile ezikufutshane nawe.
Kodwa, kuninzi ekufuneka lubeke kule nkqubela phambili ngoku, jonga i-Volante Design ye-Trek-ephefumlelweyo . Abathandi abafuna ukutshintsha iyunifomu yabo ye-cosplay unokufuna ukukhangela i-Etsy . Ingcebiso ngeendlela zokujonga ezona ziphezulu xa usenza i-cosplaying TNG, zama Ifashoni ke Iwebhu.
Izinwele phakathi kwenkulungwane yamashumi amabini anesithathu
UGrace Lee Whitney 1 - iiWombles2010-10-10T03: 37: 08Z
U-Theiss wayengathintelwanga kwiingubo kodwa ukongeza wenza izinto ezaziqhubeka kwiintloko zabadlali. Oku kwakungeyona inwele. Abalandeli abaninzi bayayamkela iwigi enxitywe ngumlingisi uGrace Lee Whitney (owenza iYeoman Rand) njengenye yeenwele zeenwele ezivela kwi-TOS. Iinwele zeRandi zaziphantse zazinkulu njengentloko yakhe iphela kunye negolide njengeendiza zeRumpelstiltskin.
Ngokwenqaku elikwi StarTrek.com, uWhitney ubonga umyili ngokudala iwigi . Uye wachaza nendlela abayenze ngayo.
Yayenziwe ngeewigi ezimbini zeMax Factor ezilukiweyo ngokudibeneyo ngaphezulu kwesingxobo seengcingo, kuchaziwe UWhitney kwi-StarTrek.com . Simane sigcina ukubuya umva nokubheka phambili kwigumbi likaGene [Roddenberry], kwaye nasemva nangaphambili, kwaye wagcina esithi, 'Hayi, yanda.'
I-Theiss yajoyina i-TOS ebekwe ngugqirha wokwenza UFred Phillips . KwakunguPhillips owenza ukubonakala kweendlebe zikaSpock (ngoncedo lomncedisi uCharles Schram) kwaye ngokunjalo namashiya. Isimo sokuqala samashiya kaSpock sasibusy, ngokukaLeonard Nimoy kolu dliwanondlebe lwevidiyo .
Spock kunye namashiya akhe eenwele zeYak
ULeonard Nimoy ekwakhiweni kukaSpock kwiStar Trek - EMMYTVLEGENDS.ORGJonga udliwanondlebe olupheleleyo emmytvlegends.org/interviews/folks/leonard-nimoy2010-06-22T16: 11: 17Z
Ekugqibeleni, uPhillips wafumanisa izinto ezazisebenza nzima. Ngoku ka StarTrek.com , UPhillips wacheba iziqwenga zomphandle zamashiya amsulwa kaNimoy ngaphambilana kokuthimba kwaqala.
ubudlelwane bo t kunye ne-dalvin
UPhillips uxinene ngaphakathi kwifom yamashiya amatsha ngepensile yeshiya, emva koko wapeyinta ezi ntlobo ngentsimbi yomoya, uNick Ottens ubhalele i-StarTrek.com . I-gum yomoya yayisetyenziselwa ukudibanisa ubude obukhawulezileyo beenwele zesisu se-yak, ezincitshiswa nguPhillips ukusuka kwizitendi ezinde, ukuxuba oobhontsi abancinci kwinto eseleyo yamashiya kaNimoy.
Inkangeleko yayingumqondiso kwaye ngamanye amaxesha yayilingiswa. Kwi-Trek esefashonini ityhila, amagcisa okuzenzela kunye neengcali zeeprothics ukulungisa abantu kwiiVulcans naseRomans ngokusebenzisa i-latex kunye neenkophe ezingezizo - ezazenziwe ngentambo, hayi iinwele ze-yak.
Mhlawumbi uchukunyiswe luhlobo olutsha lweTrek etyhila kwiParamount + okanye ngenye into ngokupheleleyo, ukujonga iVulcan nguvulindlela nguPhillips ngoku kuyinxalenye yesitayile esigqithisileyo kumashumi amabini ananye e-Century Earth.
Ngokwiphephandaba laseBritane, Ingxelo yemihla ngemihla , amanenekazi amancinci anyamezela inkqubo yotyando yobuhle kraca eyajika amanenekazi amaninzi ukuba abe nguSpock kwi 'Star Trek.'
I-MCR ye-Aesthetics / i-InstagramNgaphambi (ngasekhohlo) nasemva (ngokufanelekileyo).
Inkangeleko yaziwa njengamehlo empungutye, kwaye yayinguvulindlela kwimidiya yoluntu kunye neenkwenkwezi zikamabonakude uKendall Jenner. Ngokwenqaku, le pateni intsha yokukhanya kwamashiya amantombazana xa ithelekiswa noSpock, Iidola zeBratz , kunye nabathakathi kwiHocus Pocus.
Ifemu, ekubhekiselwe kuyo njenge I-MCR yobuhle , Yenza intengiso ngale nkangeleko yabo kwiwebhu kwaye Iphepha le-Instagram . I-MCR ithi abasebenzi babo abaqeqeshwe ngokupheleleyo baneetalente zokufumana iziphumo ezintle ezenzelwe umntu owufunayo.
I-Fox okanye iVulcan Jonga
Isifundo samashiya abomvu, AKUKHO BLEACH! | INDLELA YOKUSEBENZAMolweni nonke! Uyolo 2021, siyenzile! Ndiyanikhumbula nina bafana, incam yeenyanga ezili-12 zokugqibela kunye nokuqala kwale kuye kwaba sisiphithiphithi njengesihogo ke ndiyathemba ukuba nonke anizikhumbuli ngekhefu lam elincinci. Kwividiyo yanamhlanje ndiza kuba ndikubonisa yonke indlela endiziphumeza ngayo i-crimson browser ndisebenzisa NO BLEACH!…2021-01-26T20: 27: 51Z
Ixesha lokugqibela lomculi weemaski 4
Kuyabonakala ukuba, umntu akafuni ukusebenzisa i-MCR ukufikelela kolu jongo. Zininzi Izifundo kwiYouTube ezibonisa iindlela zabantu zokulungisa amashiya abo.
Njengombhali wemidlalo kunye nembongi U-Oscar Wilde uthe , ubomi buxelisa umsebenzi wobugcisa ogqithisileyo wobugcisa uxelisa ubomi. Kule meko, uMhlaba awunabo abathutha okanye abaqhuba i-warp; ngokukhawuleza inokuba ne-1000 yamanenekazi ahambahamba ngeenxa zonke abonakala ngathi ziiVulcans.
Inqaku langaphambili Ngaba uSimon Cowell ubuya kwakhona kwi-AGT 2021 Emva kokonzakala kwakhe? Inqaku elilandelayo Amantombazana angamantombazana kaMike Tyson kunye neMbali yokuDibana: Iinyani ezi-5 eziKhawulezayo UJohn Panchkula
Izigaba: Umqala Iwiki Amazon-Prime
Ixabiso matt bennett kwixabiso elifanelekileyo
ngubani ophumelele amandla e-veto ngokuhlwanje
inde kangakanani aphmau
U-nancy uzobe ixesha le-1 isiqendu 17